Boca del Río Bona iCosta de Oro, eyona ndawo ibalaseleyo! - I-Airbnb
Boca del Río Bona iCosta de Oro, eyona ndawo ibalaseleyo!
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJaime
IN THE kwaleyo BEST OF THE kwilokishi UMMANDLA OF Boca del Río, Veracruz, Mexico, Costa de Oro, zokulala ezipheleleyo ... 1 ibhloko evela Ávila Camacho blv, entliziyweni ehotele, kufuphi izibhedlele, iindawo zokutyela, kwiiklabhu, waku ... ukuba ukhetha umthambo, eyona boulevard ingcono ukuyenza ngokukhuselekileyo kunye nembonakalo yomhlaba ngasemva ... ukuba ukhetha ulwandle, 100m kude ... kwisitalato? eyona ikhuselekileyo! yabucala kunye nokhuseleko lwayo kunye neekhamera zokucupha ... ngaphandle kokukhanya okuninzi, ngaphakathi kwesilumko sokuphumla, indawo yokuphumla.
Indlu yendabuko kwisitayela esineenkcukacha ezininzi kunye nazo zonke izinto ezithuthuzelayo zanamhlanje. Amagumbi okulala eendwendwe akumgangatho ophantsi abelana ngepatio esembindini enendawo epholileyo ngakumbi ngorhatya nasebusuku, kodwa ngokuzimela ngokupheleleyo kuthi, abanini bendlu enkulu. I-suite igqityiwe, ibhedi yobukhulu bendlovukazi, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elixhotyiswe (i-oven microwave, blender, izitya, induction electric grill, ifriji) yokusetyenziswa kuphela, itafile, izitulo, idesika, i-WiFi, i-air conditioning, ifeni, intsimbi. Ibhedi, iitawuli, isepha, ishampoo, iphepha langasese., I-Smart TV 40 "... KWAYE NGOKU NGAMANYATHELO OKUBUSWA KUNYE NAMAQATHA OKUGQIBELA, ngenxa yempilo yakho, impilo yabo bonke.
Sine-boulevard eselunxwemeni ibhloko enye kude, apho unokuhamba okanye ubaleke okanye ukhwele ibhayisekile yakho okanye i-rollerblades. Kwikona kukho isikwere sokutya nesiselo, iindawo zokutyela ezininzi kumgama weemitha ezimbalwa, iikhefi zemveli ezikwiibhloko ezimbalwa kude ... kunye nazo zonke iAndamar, Las Américas, Palmas, Boka, Del Sol, Mocambo, Vela kudederhu lweevenkile, iikhilomitha ezimbini. kude. ngeenxa zonke.
I-Boca del Río idume njengendawo yokubaleka, i-triathlon, ukhuphiswano lwebhayisikile ... sineyona ndlela ilungileyo (indawo kunye nentuthuzelo) yokusingatha imbaleki okanye umlandeli.
Kwaye ukuba ufuna - ngethemba hayi - isibhedlele, ngaphantsi kwekhilomitha kude zizibini zezona zibhedlele zingcono zabucala, kunye neekhemesti ezininzi ... ngokucacileyo uya kuhlala unoncedo lwethu kunye noluvo lwezonyango kwiimeko ezincinci.
Ndiya kufumaneka ngokobuqu ukuze ndinamkele ixesha elininzi, kodwa ndihlala ndilinde into oyifunayo, ekubeni ndihlala kumgangatho ophezulu; Uya kuhlala unemfihlo, intlonipho, indawo yakho.